Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Kirk Ziehm ayaa loo magacaabay maamulaha cusub ee Buildout
Buildout, oo ah hoggaamiye otomaatiga suuqgeynta ee CRE, ayaa Kirk Ziehm u magacaabay madaxa cusub ee shirkadda. Kirk oo ah hoggaamiye wax -ku -ool ah oo waayo -aragnimo leh, wuxuu keeni doonaa rikoodh la taaban karo oo ah 20+ sano oo hoggaamineed oo gaar ah, maareynta hawlgallada iyo diiradda istiraatiijiyadeed si uu si guul leh ugu kaxeeyo hal -abuurka Buildout iyo dadaallada koritaanka.
Markii hore, Kirk wuxuu qabtay kaalin hoggaamineed oo sarsare bixiyeyaasha teknolojiyadda oo ay ku jiraan Zego (Powered by PayLease), SeatGeek, iyo Cvent. Dhawaanahan, Kirk wuxuu ahaa COO of Zego (Powered by PayLease), oo ah shirkadda tikniyoolajiyadda hantida ee ka caawisa hawlwadeennada inay casriyeeyaan waaya -aragnimadooda deggenaanshaha iyo inay kor u qaadaan haynta.
"Buildout wuxuu leeyahay taariikh hodan ah oo u adeegta bulshada dilaalinta ganacsiga," ayuu yiri Ziehm. "Waxaan rajeynayaa inaan la shaqeeyo kooxdeena kartida leh si aan u sii wadno bixinta iyo hagaajinta xalalkeena hormuudka u ah dhammaan wareegga nolosha CRE. Laga soo bilaabo suuqgeynta ilaa CRM illaa dib -u -iibinta - Waqooyigayaga Xiddiggu wuxuu awood u siinayaa macaamiisheenna cajiibka ah inay xiraan heshiisyo badan, inay yeeshaan aragti dheer dhammaan ururadooda oo ay helaan xog ka wanaagsan suuqyadooda dhexdooda. ”
Kris Krisco, Sarkaalka Sare ee Macaamilka iyo Isuduwaha Buildout, ayaa yiri, “Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay oo nasiib ayaan u leenahay in Kirk uu ku jiro kooxdeena. Khibradiisa hogaamineed, wanaajinta iyo kor u qaadista hawlgallada ayaa fure u noqon doonta guusha iyo waayo -aragnimada macaamiisheena. Mustaqbalku wuxuu u iftiimayaa dilaaliinta ganacsiga! ”